IZiko leDatha | Imbuyekezo Mamo Power Technology Co., Ltd.
Njengombane obonelelweyo obalulekileyo, iseti yomvelisi isetyenziswa ngokubanzi kwiziko ledatha. Ukuba umbane uphelelwa ngesiquphe, inkampani iphela inokukhubazeka. Imizuzu embalwa yokuphumla inokubangela ilahleko enkulu kwezoqoqosho. Iinkampani ezinkulu ze-e-commerce zikhokelela kwindlela yokufumana isisombululo kule ngxaki ibalulekileyo: singaqinisekisa njani ukuba unikezelo lwamandla oluthembekileyo alubeki inani elikhulu ledatha abayifunayo ukwenza umsebenzi wabo emngciphekweni.
Akumangalisi ke ngoko, ukuba imibutho ye-e-commerce ephambili ibixakekile izixhobisa ngezixhobo zejenreyitha ezifanelekileyo ukuze babenakho isibonelelo samandla esingxamisekileyo esinokuthi singabaphoxi kwitumente yayo nayiphi na indlela yokusilela kwigridi, kungabikho themba lokuba ukude kangakanani ithuba linokongezwa. Amandla kufuneka aqhubeke ukukhanyisa!
AMANDLA AMANDLA asebenzise isayensi eqhubekekayo ukubeka phambili iimfuno zehlabathi kunye nokuthembeka. Izigayo zedizili zikaMamo zinolawulo olunesimbo, zibonise ubuchule bokufumana ukwamkelwa komthwalo ikhulu leepesenti, kwaye abathengi beenkcukacha manani bayaphumla baqinisekisiwe ukuba bathenga ubuchwephesha bombane ngecala eliphambili ekuthembekeni nasekuthembekeni. Le yinkampani entle uMamo ayigcinayo.